Yini Ebolekwe & Kungani amaKatolika Fast? – 2fish
Home / Church / Issues / Yini Ebolekwe & Kungani amaKatolika Fast?
YokuHlawula is a period of nokuzila ukudla ukuthi udla Easter. It zokugcina izinsuku ezingamashumi amane, kodwa ngamaSonto akubalwa njengoba izinsuku, iqala kanjalo Ebolekwe mayelana 46 Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba Easter. Ngoba Katolika, YokuHlawula uqala on Ash Wednesday luphele 3:00 PM on Good Friday–izinsuku ezimbili ngaphambi kwe-Easter Sunday. Akuve kancane ezahlukene amaKatolika Orthodox.
Phakathi nengxenye enkulu emazweni aseNtshonalanga, it ngokuthi Ebolekwe, okuyinto igama lesiLatini elisho "izinsuku ezingamashumi amane." E-United States, Nokho, ubizwa ngokuthi Ebolekwe emva kwegama Old English spring.
Ngakho, Ziyini Ashes mayelana?
In the Bible, ngokubeka ngomlotha ekhanda komuntu kubonisa nokulila ukuphenduka (bheka uJobe 42:6, et al.).
Ekhomba emuva amazwi kaNkulunkulu ukuba u-Adamu ku Genesise 3:19, "Wena siluthuli, futhi othulini uyakuphendukela,"Umlotha kukhona isikhumbuzo esinamandla kithina yokufa zethu siqu futhi kudingeka sigweme ezonweni zethu. Kunjalo, the uphawu lwesiphambano esiphongweni yethu luyisibonakaliso ukuthi singabakhe kaKristu Jesu ngentando Ubhapathizo, futhi sethemba ukuthi sihlanganyela kokuvuswa kwakhe (bheka kaPawulu Incwadi eya kwabaseRoma 8:11).
yisibonelo sokulandelwa Biblical ngoba uphawu lwesiphambano zingatholakala eNcwadini yeSambulo 7:3, okhuluma ethembekileyo ethola uphawu avikelayo ebunzini labo. imibhalo zomlando Early Christian ubheke le uphawu lwesiphambano kanye. UTertullian, azungeze 200 A.D., wabhala, "Kuzo zonke izenzo ezivamile zokuphila kwansuku zonke, thina ukulandelela phezu kwebunzi lika isibonakaliso " (Uhulumeni walidlulisela 3).
Kungani AmaKatolika Fast ngesikhathi Ebolekwe?
Isiko izinsuku ezingu-40 womthandazo futhi bezila ukudla ilandela isibonelo sikaJesu, owachitha 40y izinsuku ukudla futhi ethandaza ehlane belungiselela nenkonzo yakhe yasemhlabeni, bheka uMathewu 4:2.
On Ash Wednesday bese kuthi njalo ngoLwesihlanu ngesikhathi Ebolekwe, ethembekileyo abizelwe fast. Leyo, AmaKatolika abanempilo enhle futhi abaneminyaka ephakathi kwengu- 18 futhi 59 kudingeka ukuba adle ukudla okukodwa nje umnyuziki ukudla ezimbili ezincane (okuyinto ndawonye wayengeke alingana ukudla okugcwele).
Ukusetshenziswa kwamanzi nemithi, kunjalo, abafakiwe the fast.
Ukuzila ukudla kuyinto kokuzivivinya ngokomoya eziklanyelwe inyama zizithoba. Njengoba Saint Paul wabhala encwadini yakhe Incwadi yokuqala ayibhalela abaseKorinte, "Mina Awe-Pommel umzimba wami futhi niwunqobe, funa ngemva kokushumayela abanye mina ngokwami ​​kumele ngokuhoxiswa. "
Kukhona emandleni amakhulu exhunywe ukudla uma wenziwa ngenxa yothando ngoNkulunkulu. In Mathewu 6:4 futhi 18, UJesu weluleka abalandeli baKhe ukudla futhi anikeze isipho, hhayi ngoba ukwamukelwa amadoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu "obona ekusithekeni futhi uyokuvuza." Lapho abafundi bembuza ukuthi kungani bona ababengakwazanga ukuwanikela nikhiphe umoya omubi, waphendula wathi, "Loluhlobo lwamadimoni lungaphuma ngeke uzakuxoshwa yinoma yini kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla" (Mark 9:29). Ingelosi ezibonakalisa Cornelius e Uhlelo lomlawuli, 10:4 kwembulwa kuye, "Imikhuleko yakho futhi izipho zakho kunyukile kwaba njengesikhumbuzo kwaba yisikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu."
Kungani AmaKatolika Dedani okudla inyama ngoLwezihlanu ngo Ebolekwe?
On Ash Wednesday bese kuthi njalo ngoLwesihlanu ngesikhathi Ebolekwe, amaKatolika 14 iminyaka ubudala nangaphezulu zibizwa ngokuthi ukuba sidede kokudla inyama. Ngokusho Canon Law, Empeleni, AmaKatolika zibizwa ngokuthi ukuba sidede inyama (noma enze isenzo okulingana kokuzisola) on njalo ngoLwesihlanu phakathi nawo wonke unyaka.1
igunya The Church ukwenza imithetho ziphezu ethembekileyo livela Kristu uqobo, owathi kubaPhostoli kuMathewu 18:18, "Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini; Oyakukubopha emhlabeni koba kukhululiwe ezulwini. " (Uthe kuPetru, kakhulu.)
Njengazo zonke imithetho zeSonto, ekuzileni inyama ngoLwesihlanu wayengabophekile uqinisiwe ukuba abe umthwalo kithi, kodwa kusisondeza kuJesu. Usikhumbuza ukuthi lolu usuku lwesonto uJesu wahlupheka futhi wafa ngenxa yezono zethu.
In yakhe Incwadi yokuqala ayibhalela uThimothewu 4:3, UPawulu Saint wabalahla labo "ngubani benqabela umshado futhi enjoin ekuzileni ukudla." Abanye baye balisebenzisa kabi leli vesi ngecala imikhuba Catholic of ukungashadi futhi ekuzileni inyama.
Kule ndinyana, nakuba, UPawulu wayekhuluma Gnostic, esasifuna phansi esikhuluma ngomshado wayeseshiya phansi ukudla ngoba babekholelwa endalweni okubi. amaKatolika, Ngokolunye uhlangothi, ningakholwa ukuthi izwe ebonakalayo yimbi. AmaKatolika athile umkhuba ukungashadi, kodwa uma bonke amaKatolika wayekwenza ukungashadi, bekungenjalo, besingeke sibe khona amaKatolika esikhathini eside esadlula–like the Nabanyakazi.
Kunalokho, sibona ukuzithiba ezifana izipho ezivela kuNkulunkulu 'njengoba uPawulu abhalela evesini elilandelayo le ncwadi efanayo (4:4). Nokho sidede kuyo kubo ngezikhathi ezithile futhi ngaphansi kwezimo ezithile ukuze abonise ukuthi siyamthanda uNkulunkulu wokuqala nomkhulu kunabo bonke ngenhla zonke izinto ezidaliwe.
Ukuzila, zokuzila into ethile kanye nezinye ukuzidela okuncane sinikeza ngesikhathi Ebolekwe, akuzona kwezijeziso kodwa amathuba okuba siveze bafulathele izwe nokuningi ngokugcwele kuNkulunkulu–ukunikela kuye e okudumisa nokubonga ubuthina wonke, emzimbeni nasemoyeni.
Code of Canon Law 1250: "Zonke Fridays unyaka nesikhathi yokuHlawula izinsuku penitential kanye nezikhathi kulo lonke iSonto." ↩